अनुगमन मुल्याङ्कन नै नगरी पर्सामा महिला उद्यमी नै नभएको घरेलुले प्रमाणित गर्नु गैर जिम्मेवारी हो : प्रभा खड्का
आश्विन १८, २०७६ निलम पंत
महिला उद्यमी प्रभा खड्का । तस्बिर : मध्य नेपाल
बुवा स्व.कृष्ण बहादुर खड्का तथा आमा नानी खड्काको दाम्पत्य जीवनबाट जन्मिएका चौथो सन्तान मध्येकी कान्छी छोरी हुन प्रभा खड्का । वि.सं २०३१ साल कात्र्तिक २५ गते काठमाडौं (गोठाटार) मा जन्मिएकी खड्काको बाल्यअवस्था सुखमय वितेको थियो ।
१७ वर्षको हुदाँ वि.सं. २०४८ साल असार ३२ गते चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहट निवासी योगेन्द्र कुमार खड्का सगं आफ्नै धार्मिक रितीरिवाज अनुसार विवाह समपन्न भयो । विवाह पश्चात पनि आफनो अध्ययनलाई निरन्तरता दिदै ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसबाट बि.एड सम्म अध्ययन गर्न सफल प्रभा खड्काकी २ छोराछोरी छन् । निडर चन्चले र संघर्षशिल स्वभावको हुदाँ समाजको लागि निस्वार्थ सेवा भावले योगदान गर्नु नै आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाई छ । नेपाल स्काउट संगसंगै विभिन्न संघ–संस्थामा आवद्ध प्रभा खड्का अहिले कवि शिरोमणी टोल सुधार समितीको सचिव पदमा रही विभिन्न काम गर्दै आएकी छिन् । उनै प्रभा खड्कासंग मध्य नेपालले गरेको कुराकानी :-
१) समग्रमा पर्सा जिल्लामा उद्यमी महिलाको अवस्था कस्तो छ ?
वर्तमान समयमा उद्यमी महिलाहरुको अवस्था भन्नुपर्दा राम्रै नै छ । किनकी घरको जिम्मेवारी देखि बाहिरको काम पनि महिलाहरु उतिकै जिम्मेवारीपुर्वक कार्य गरिरहेका छन । हुनत् हरेक ठाउँमा आधा आकाश ढाक्ने प्रतिशतकै हिसाबले पनि ३३ प्रतिशतको जिम्मेवारी पाएका हामी महिलाहरु जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि लडेर वा भिडेर आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्दै आएका छौ । पुरुषको मात्र मुख नताकी आफुले पनि केहि न केही आर्थिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ र आर्थिक रुपमा सक्षम बन्नुपर्छ भन्ने कुराको बोध हुदै आएको छ । घर धन्दामा मात्र सिमित नभएर हामी पनि केही गरेर सक्षम हौ ‘अरुको भरमा मात्र नबसौ’ भन्ने कुरा हामी महिलाहरुले जानी सकेका छौ । पहिलाको भन्दा अहिले महिलाको अवस्था सुध्रिदै गएको देखिन्छ ।
२)व्यवसायमा महिलाहरुलाई चुनौती कतिको छ ?
महिलालाई अवसरको साथसाथै चुनौती पनि छ । घरको काम बाल–बच्चा, सासु–ससुरा र ईष्टमित्र सबैका जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । २१ शौँ शताब्दीमा सम्पूर्ण कार्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने जस्तैः– सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्नु परिरहेको छ । घरभित्र चुल्हो–चौकामा मात्र सिमित नभएर देश दुनियाको बारेमा धेरै कुराको जानकारी हासिल हुनु अवसर हो । श्रीमान्को मात्र भर नपरी आफुले पनि आर्थिक रुपमा सक्षम भएर आफ्ना साथै बालबच्चाको आवश्यकता लागि हात फैलाउनु नपरेको अहिलेको अवस्था छ । महिला स्व–स्फुर्त रुपमा हिंडहुल गर्न पाउनु कसैको वन्देजमा बस्नु नपरेको अवस्था पनि छ । यति हुँदाहुँदै पनि महिलाहरु पुरुष सरह प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैन । अबका दिनहरु सहज होला आशा गर्न सक्छौँ ।
३) तपाईको कस्तो प्रकृतीको व्यवसाय हो ?
म आफुले एकल व्यवसाय नभई श्रीमान्ले संचालन गर्नु भएको व्यवसायलाई मैले २० वर्षदेखी सकेसम्म सहयोग गर्दैै आएको छु । हाम्रो व्यवसाय भनेको स्टेशनरी तथा जेनरल अर्डर सप्लायर्स हो । सरकारी कार्यालय, उद्योग कलकारखाना, स्कुल, कलेज र संघसंस्थाहरुमा काम गर्दै आएका छौ ।
४) बिगत कति बर्ष देखी व्यवसाय संचालन गदै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो व्यवसाय २०४५ सालदेखि संचालन भएको हो । पहिले–पहिले हामीले सानो पुँजीबाट संचालन गरेका थियौँ । आफु र आफ्ना पारिवारिक जीविकोपार्जन गर्न निकै कठिनाई थियो । त्यस्तै समस्याका बाबजुद पनि श्रीमान्को कठिन परिश्रमले धेरै उतारचढावका विच व्यवसाय चलाएका थियौ । त्यति बेला म पनि विद्यार्थी थिए । त्यस पश्चात बालबच्चा पनि भए । मैले पनि त्यति समय दिन सक्दीन थिए । पसलको आर्थिक मन्दी, बालबच्चाको लालनपालन, पढाई–लेखाई निकै समस्या थियो । त्यस्तो कठिनाईहरुको सामना गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । बच्चाहरुको हेरचाह गरि ठूला भए पश्चात मैले पुर्णरुपमा यो व्यवसायमा समय दिएर काम गर्दै आएको लगभग २० बर्ष भयो । यसमा सहयोग गर्ने विशेष रुपमा भाई संतोष खड्का बाबुको पनि राम्रै भूमिका छ । हामीले अरु ३ जना सहयोगी भाईहरुको पनि साथ लिएर आजसम्म व्यवसाय संचालन गर्दै आएका छौ र रोजगारीको वातावरण पनि मिलाएका छौ ।
५) यतिका अवधिमा तपाईले कतिको चुनौती सामना गर्नुप¥यो ?
कारोवारको उतार–चढाव, बन्द हड्तालको भार, सामानको समयमा भुतmानी नहुनु, भुतmानी नगरी ग्राहक भाग्नु, धेरै सामान नबिकेर डेट एक्सपायर हुनु, किरा, धमिराले खानु, सजाएर राखेका सामानहरु कहिलेकाही चोरी हुनु, यावत् समस्याहरुको सामना गर्नुपरेको छ । साथै बेलाबेलामा सरकारको तर्फबाट पनि दोहोरो करको मारमा पर्नु परेको छ । घरमा मात्र सिमित भएर बस्नु नपर्ने र बाहिर निस्केर विभिन्न व्यतिm, संघसंस्था, कार्यालयका व्यतmीहरु लगायत संग बिना हिचकिचाहट बोल्न सक्ने क्षमताको विकास भएको छ । श्रीमान्को असल विश्वासिलो साथीको रुपमा पाउँदा गर्वको अनुभुति भएको छ । महिलाले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने कुराको मनोबल बढ्दै गएको छ । आर्थिक रुपले सक्षम र सबल नारीको पहिचान बन्दै गएको छ । अरु पनि केही गरेर आत्मनिर्भर हुनपर्छ भन्ने भावनाको उजागार भएको छ ।
६) उद्यमी महिलालाई सरकारले दिने सेवा–सुविधा कत्तिको प्रर्याप्त र प्रभावकारी छ जस्तो लाग्छ ?
महिला उद्यमीहरुले संचालन गरेको व्यवसायमा केही प्रतिशत छुट गरेको छ । आफ्ना र घरपरिवारको लागि पनि आत्मनिर्भर र अगाडी बढ्न सकुन् भन्ने उद्धेश्यका साथ महिलाहरुको नाममा खोलिएका व्यवसायलाई केहि प्रतिशत छुट पनि दिएको पाईन्छ । सरकारले महिलाका लागि सकेसम्म कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गरेर व्यवसाय संचालन गर्न दिए अझ उनिहरुको मनोबल उच्च हुने थियो । भने, आर्थिक उन्नति पनि बढ्दै जान्थ्यो साथै राष्ट्र पनि सबल हुन्थ्यो ।
७) सरकारले उद्यमी महिलाहरुलाई प्रदान गरेको तालिमको बारेमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?
सरकारी कार्यालय अन्तर्गतका जति पनि कार्यालय छन् जस्तै घरेलु कार्यालयले महिलाका लागि आर्थिक जीविकोपार्जन गर्नको लागि धेरै तालिमहरु संचालन गरेको थियो तर त्यो तालिमले सिमित मात्र महिलाहरुले त्यसको आय–आर्जनमा लगाएका छन् । त्यस्तो कामको प्रशिक्षण दियोस् कि आफ्नो व्यवसाय साथै अन्य महिलाहरु पनि रोजगारीको वातावरण मिलोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अर्को कुरा भन्नुपर्दा घरेलु कार्यालय जस्ता अन्य कार्यालयले कस्तो व्यक्तिलाई उद्यमी भनेर सूचक गरेको छ ? उद्योग कलकारखाना खोल्ने देखि व्यापार व्यवसाय गर्ने महिला उद्यमी पर्छन् कि पर्दैनन् यो मेरो प्रश्न हो ? कतिपय महिलालाई मूल्याङ्कन गर्ने सवालमा पर्सा जिल्लाबाट कोही पनि उद्यमी महिला नभएको कारणले पुरस्कृत हुन पाउँदैनन् । कोहि पनि नभेटेर खाली गयो जस्ता गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने गरेको छ । यस्तो के हो कार्यालयले अहिले पनि अनुगमन ग¥यो र सोध्यो व्यवसाय गर्न महिला वीरगंज भरी कोही नभएर हो त ? त्यसको जवाफ हामी व्यवसाय महिलाहरुको प्रश्न हो सम्बन्धीत निकायलाई ?
८) उद्यमी बन्न चाह्ने महिलालाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
समग्रमा भन्नुपर्दा सम्पूर्ण व्यवसाय संचालन गर्नु भएका महिलाहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु आत्मविश्वासका साथ रोजगारीमा सामेल हुनुहोस् । व्यवसाय संचालन गर्दा उतार–चढाव त हुन्छ नै त्यसमा नआतिकनुस् काम गर्दै जानुस् लक्ष्यमा अवश्य पुगिन्छ । भनिन्छ एकले थुकि सुकि सयौं ले थुकि नदि भने जस्तै घरमा मात्र सिमित नभई जीविकोपार्जनमा परिवार र राष्ट्रका लागि हातेमालो गर्दै अगाडी बढांै । आफु पनि बाँचौ र नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको पहिचान दिउँ । आर्थिक रुपले सबल बनौ भन्न चाहन्छु । अहिले त झन राष्ट्र नै पुरा आर्थिक तिर उन्मुख भएको बेलामा हामी जस्ता महिला उद्यमी व्यवसायले काधमा काध मिलाएर समृद्धको बाटो रोजौं भन्न चाहन्छु ।
शनिवार, आश्विन १८, २०७६, ०४:१०:००
मंसिर २८, २०७६ निलम पंत
मंसिर १५, २०७६ निलम पंत
नेपाल पत्रकार महासंघको बैठक समपन्न, नयाँ सदस्यता फर्म खुल्यो माघ ७, २०७६